के बाइबलले दासत्व प्रथालाई अनदेखा गर्दछ?
प्रश्न: के बाइबलले दासत्व प्रथालाई अनदेखा गर्दछ?
उत्तर: यस्तो प्रवृत्ति पाइन्छ कि दासत्व वा दासप्रथालाई अतीतको कुरा देखिन्छ। तर यस्तो अनुमान लगाइन्छ कि आज यस संसारको लगभग 270 लाख मानिस यस्तो छन जो कि दासत्वमा जीवन व्यतीत गरि रहेको छ: जबरदस्ती मजदूरी लिन, देह व्यापार, विरासतमा पाएको कर्जा चुकाउने दासत्व आदि। त्यो जो पापको दासत्वबाट छुटकारा पाएका, येशू ख्रीष्टको अनुसरण गर्नेहरु हुन्, लाई त्यी आजको संसारमा मानवको दासत्वलाई समाप्त गर्ने नायक हुनु पर्छ। तापनि प्रश्न यो उठछ कि, बाइबलले दासत्वको विरोधमा ठूलो दृढ़ताको साथ किन बोल्दैन? तथ्य त यो हो, कि किन बाइबलले मानवको दासत्वको सर्मथन गर्दै प्रतीत हुन्छ?
बाइबलले विशेष रूपमा दासत्वको प्रथाको निंदा गर्दैन। यो निर्देशहरुलाई दिन्छ कि कसरी दासहरुसँग व्यवहार गर्नु पर्छ (व्यवस्था 15:12-15; एफिसी 6:9; कलस्सी 4:1), तर दासत्वलाई पूर्ण तरिकाले गैर कानूनी ठहराइदैन। धेरै जसोले यसलाई यसरी हेर्छन कि मानौ बाइबल दासत्वको सबै प्रकारहरुलाई अनदेखा गरि रहेछ। धेरै मानिसहरुले जुन कुरालाई बुझ्नमा विफल हुन्छन त्यो यो हो कि बाइबलमा दिइएको दासत्वको समय आजको दासत्व भन्दा भिन्न थियो जसलाई अतीतमा धेरै युगबाट संसारको धेरै भागहरुमा उपयोगमा ल्याईएको थियो। बाइबलमा दासत्व पूर्ण तरिकाले जातिको माथि आधारित थिएन। मानिसहरुको उनको राष्ट्रीयता वा छालाको रंगको आधारमा दासत्व बनाउदैन थिए। बाइबलको समयहरुमा, दासत्व धेरै जसो अर्थव्यवस्थाको माथि आधारित थियो; यो सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय थियो। मानिस स्वयंलाई दासी हुनको लागि बेची दिन्थे जब उनीहरु आफ्नो कर्जालाई तिर्न सक्दैन थे वा आफ्नो परिवारहरुको हेरचार गर्नमा असमर्थ भएका थिए। नयाँ नियमको समयमा, धेरै पटक डॉक्टर, अधिवक्ता र यहाँ सम्म कि राजनेता कोहि अरुको दासत्वमा थिए। केहि मानिस वास्तवमा कुनै अन्यको दासत्वमा हुनुलाई मन पराउद थिए ता कि उनीहरुको स्वामिहरु द्वारा उनीहरुको प्रत्येक आवश्यकताको पूर्ति हुन सकोस्।
अतीतको धेरै युगमा दासत्व अक्सर पूर्ण रीतिले छालाको रंगको माथि आधारित रहेको थियो। सुंयक्त राज्य अमेरिकामा, धेरै काला मानिसहरुलाई उनीहरुको राष्ट्रीयताको कारण दासत्व सम्झिन थियो; धेरै दासीहरुको स्वामी सत्यमा यो विश्वास गर्थे कि काला मानिस उनीहरुको भन्दा निम्न स्तरको प्राणी थिए। बाइबलले जाति-आधारित दासत्वको निंदा गर्दछ, जसमा यसले यो शिक्षा दिन्छ कि सबै मानिस परमेश्वरद्वारा सृजिएको र उहाँको स्वरूपमा बनेका छन् (उत्पत्ति 1:27)। ठीक त्यही समय, पुरानो नियमले अर्थ-व्यवस्था आधारित दासत्वको अनुमति दिदैन र यसलाई नियंत्रित पनि गरेन। मुख्य मुद्दा यो हो कि जुन दासत्वको अनुमति बाइबलले दिएको छ त्यो कुनै पनि प्रकारले जातीय आधारित दासत्वसँग मेल खादैन, जसले अतीतको बितेको युगहरुमा हाम्रो संसार ग्रस्त रहेका छ।
यसको अतिरिक्त, दुवै अर्थात् पुरानो र नयाँ नियम "मनुष्य-को-चोरी" गर्ने प्रथाको निंदा गर्दछ, जो कि 10औं युगमा अफ्रीकामा प्रचलित थियो। अफ्रीका दासत्व-को-शिकारीहरुले भरिएको थियो, जसले उनिहरुलाई दासत्व-को-व्यापारिहरुलाई बेची दिन्थे, जसले उनिहरुलाई अगाडीको नयाँ संसारमा वृक्षारोपण र खेतहरुमा काम गर्नको लागि बेची दिन्थे। यो प्रथा परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित हो । सत्य त यो हो, कि मोशाको व्यवस्थामा यस प्रकारको अपराधको सजाय मृत्यु दण्ड हो: "जसले कुनै मानिसलाई अपहरण गर्छ वा बेच्छ अथवा पक्रिदा त्यो त्यसकै हातमा फेला पर्छ, त्यो मारिनैपर्छ" (प्रस्थान 21:16)। यसप्रकारले, दासत्व-को-व्यापारिहरुलाई पनि त्यी मानिसको सूचीमा रखिएको छ जो "अधर्मी र पापले भरिएका" थिए र त्यही श्रेणीमा छन् जो आफ्नो माता-पितालाई घात गर्ने, अधर्मी, निंरकुश, भक्तिहीन, व्यभिचारी र अपवित्र र अशुद्ध मानिस हुन् (2 तिमोथी 1:8-10)।
एउटा अर्को महत्वपूर्ण कुरा जसमा बाइबलले प्रस्ताव दिन्छ त्यो समाजको सुधारको अपेक्षा उद्धारको तर्फ संकेत दिन्छ। बाइबलले अक्सर मुद्दोको पहुच बाहरको तर्फ निपटारा गर्छ। यदि एउटा व्यक्ति परमेश्वरको प्रेम, दया र अनुग्रहको अनुभव उसको उद्धारलाई प्राप्त गर्दै अनुभव गर्दछन, तब परमेश्वर उसको प्राणलाई सुधार्दै, जसरी उसले सोच्न र कार्य गर्नु पर्छ,त्यमा परिवर्तित गरि दिन्छ। एउटा व्यक्ति जसले परमेश्वरको उद्धारको वरदान र पापको दासत्वदेखि स्वतंत्रताको अनुभव गरेका छन्, तब जस्तै जस्तै उसको प्राण सुधार्दै जान्छ, उसले यो जानेछ कोहि अन्य मानव प्राणीलाई दासत्वमा राख्न गलत हो। त्यो पावलको साथ देख्नेछ कि एउटा दासत्व "प्रभुमा एउटा भाई" हुन सक्छ (फिलेमोन 1:16)। एउटा व्यक्ति जसले सच्चोमा परमेश्वरको अनुग्रहलाई अनुभव गरे, अन्यहरुको प्रति अनुग्रहले भरिएको व्यक्तिमा परिवर्तित हुन सकून। दासत्वको अन्त गर्ने बाइबलको निदान यही हो।